4 eedeysane oo lala xariiriyay lacago faalis ah oo maxkamadda la soo taagay – The Voice of Northeastern Kenya
Waxaa maanta maxkamadda Milimani ee magaaladatani Nairobi ka soo hor muuqday afar qof oo lagu eedeyay inay ku lug leeyihiin fadeexad dhawaan soo baxday oo ku aaddanayd lacago been abuur ah oo laga helay bangiga Barclays laantiisa Queensway ee magaaladatani Nairobi.
Ciidamada xaaladaha kala duwan sida deg dega ah ula tacaalo ee loo yaqaano Flysing Squad ayaa maalmo ka hor 20 milyan oo doolar una dhiganta 2 bilyan oo shilin gacanta ku dhigay.
Booliska ayaa sheegaya in laba ka mid ah shaqaalaha bangiga oo la xiray markii dambe la siidaayay.
Afarta qof ayaa lagu eedeyay inay iska dhigeen maalgashato iyadoo kenyaanka aanan ka shakin ku khiyaanay lacago faalis ah.
Qareenka eedeysanayaasha u doodaya oo lagu magacaabo ,Martin Oloo ayaa wacad ku maray inuu ka soo hor jeedsan doono dacwadaha lagu soo oogay maadaama booliska uu ku dhaliilayo inay sameyaan baaritaano aanan waqti badan la gelin oo lala soo degdegay.
Shalay ayay ahayd markii agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalka Mr. George Kinoti uu tagay xarunta bangiga halkaasi oo uu kulan kula qaatay sarakiisha sar sare.
Ciidamada ayaa lacagtan been abuurka ah helay xilli ay baaritaano ku wadeen fadeexad dhanka lacagaha waxba kama jiraanka ah oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay magaala madaxda wadanka.
Sarakiisha ayaa bangiga howlgalo ka sameeyay kaddib markii ay ogadeen in mid ka mid ah macamiisha bangiga uu la yimid lacagtan waxba kama jiraanka ah isagoo doonayay inuu mid ka mid ah maareeyaasha ku khiyaano si uu lacag dhab ah ula baxo.
2-da duhurnimo ee maanta ayaa la filayaa inay maxkamaddu go’aan soo saarto halka sarakiisha dacwad oogidda ay codsanayaan in loo ogolaado inay eedeysanayaasha xabsiyada ku sii hayaan muddo 10 cisho ah.
Hal bil ka hor ayay ahayd markii ciidamada gaarka ah ee ka hor dembiyada ay sheegeen inay lacago faalis ah oo dhan 32 bilyan ay ka heleen guri ku yaalla magaalada Ruiru ee ismaamulka Kiambu.
← Dubat Cali Cameey oo baaq ka soo saaray saameynta abaaraha
Guddoomiyihii hore ee ismaamulka Kiambu oo digniin adag ka soo saaray musuqmaasuqa →